CPA Vs dance: Which is Better For Your Career & Muhoro? [2018 Update]
CPA Vs dance: Ndeupi Mumwe nani Your Career & Muhoro?
23 Aug CPA Vs dance: Ndeupi Mumwe nani Your Career & Muhoro?
Posted at 22:50h mu Accounting Careers, Main Blogroll kubudikidza Bryce Welker, CPA 0 Comments
Updated:Gumiguru 21, 2018
kazhinji College vadzidzi vanozviwana kuvhiringidzika pakusarudza pakati kuenda kwavo CPA rezinesi kana kuwana ane dance dhigirii. Kiyi yokuwana zvakarurama sarudzo iri kuburikidza pakuongorora kwacho renyu nebasa zvinangwa zvako munhu zvaanoda. Panzvimbo pokutarira mudenga vamwe mazano, zviri nani kuti iwe utore nguva uye kufunga zvawakaronga ramangwana. Kukubatsira kuita sarudzo, ngatitarise zvinokosha nomumwe kuitira kuti iwe chokutyira uye chete kufunga yako yemberi zvaangaita.
Chii chinonzi dance?
CPA Vs dance: Career path
CPA Vs dance: mari
CPA Vs dance: Certification mari
CPA Vs dance: Time Zvinodiwa
saka, Ndeupi Mumwe nani kwauri?
A vaipupurirwa Public zveakaunzi (CPA) ari mumwe accreditation zvemari paakavapa neAmerican Institute of vaipupurirwa Public Accountants (AICPA). advertising Izvi kuzivikanwa somunhu chiratidzo kubudirira zvikuru mari indasitiri. Kana uchida kuva CPA, unofanira akunde bvunzo kuti chiri kuitwa ne AICPA. kwazvo CPA bvunzo kugadzira kwamuri chinoumba pfungwa rokuzvidavirira uye anoedza kunzwisisa kwako uye kukwanisa kushandisa kudzidza ichi kumunda Auditing uye chizvidavirire. A CPA anoonekwa kuva nyanzvi mibvunzo mutero mutemo kana kupa zano mutero vanhu. Uchava pachena kusarudza mikana basa duku kana hombe rakasimba kana kunyange pachako.
A Tenzi Business Administration kazhinji kwemakore maviri dhigirii kosi zvaipiwa mabhizimisi mumakoreji kukugadzirira zvemabhizimisi. An dance chinhu generalized kudzidza kunyika yose basa mabasa uye zvakakunakira akakodzera iwe kana uchida kuti acheke imwe niche mumunda management, kunyanya Marketing. Vadzidzi vari yakazaruka tichitevera dhigirii kosi kuburikidza chikamu-nguva uye daro hwekudzidza zvichienderana pamusoro yavo nzvimbo unyanzvi yevasungwa uye kukosha mune indasitiri. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, mari, Marketing, dzevanhu pfuma, uye kushanda (mune ukama utariri kuongorora uye nzira). Kudzidza purogiramu dance haungoratidzwi mari uye kunosanganisira nyaya yakaita dzezvoupfumi, Marketing, musangano maitiro uye quantitative ongororo.
Somunhu CPA, basa rako mazita zvingasanganisira: CFO, wevanoongorora akaunzi, mutero mubatsiri kana forensic akaundendi. Sezvo nzvimbo kudzidza ive dance zvakawanda paupamhi-siyana, pane zvakawanda basa sarudzo. Kana uine CPA rezinesi, zvaunogona kusarudza anenge akatarira mukati chizvidavirire uye mari. Kana wawana vaviri, uchava nyika chamuinacho.
Kana une dance, une sarudzo wakakura basa mikana, depending on your area of specialization. Kana une dance, unogona kushanda sechinhu mazano, Marketing Manager, inivhesitimendi bhenga, mukuru mashoko mukuru, akavhiyiwa maneja kana zvemari mubatsiri.
Hazvina chikuru chakavanzika seane dance kana CPA anogona kuzarura zvakawanda basa madhoo uye kuwedzera kuwana zvinogona. Makore ruzivo uye apo iwe kushanda vachava zvimwe matambudziko. Kana uri CPA uchava mari inenge 10% kupfuura wako vasiri CPA dzomuzana. MuMedhia akapiwa muhoro nokuda CPA iri $62,123 pagore. Pane rimwe divi, nzvimbo anobatsira zvikuru basa muripo kuti dance - zvichireva kuti chikoro iwe vaipinda (kwakavakirwa National chepamusoro) anogona tinzwe sei iwe kuti. zvisinei, wokutanga gore pashure kuwana dance yako, unogona kutarisira kugamuchira basa inopa paavhareji pamusoro $50,427. Nepo kuti zvingaita underwhelming, yeuka kuti uchaona wako mari zvinogona kuwedzera yekudyidzana sezvo iwe uwane basa ruzivo. Paavhareji, kana iwe une dance, unogona kutarisira zvakawanda yakatikurei vachimutsa uye kubudirira pane vezera rako pasina credential ichi.
Zvakaoma kuisa mutengo chipepa iri kuva CPA. The muripo pachikoro apo iwe tora wako Rokutenderwa dhigirii zvichava chikamu mukana wokuti vanhu vanga. Pamusoro pe izvozvo, iwe uchava mari chokuita chero prep makosi ungafunga kuti kugadzirira CPA bvunzo. Unogona kunzwisisa izvi zvichaita mari pamusoro $2,000. Achitaura bvunzo pachayo, mari-chinja zvikuru kubva ehurumende kuti mamiriro. Vamwe inoti vane kunyoresa kubhadhara kuti rwakoromoka nokuda mangani chikamu(S) of bvunzo iwe kuronga kugara kwenguva. Kune mamwe mazai retakes. (Unofanira bvunza mamiriro ako revatungamiriri accountancy.) On avhareji, zvichaita mari pamusoro $1,500 kugara nokuti zvikamu zvose zvina. pakupedzisira, pane mari rezinesi pachayo, izvo Avharenji pamusoro $150. Usakanganwa kuti kuti tirambe rezinesi wako, iwe uchava vaifanira kupinda CPE makosi nguva dzose pamusoro yamuchakwanisa chinoparira mimwe mari. vamwe inoti, kufanana Connecticut, zvinoda 40 maawa CPE nerimwe gore. Zvingaita kuti varasikirwe sezvo zvakawanda $4,000 mu mberi dzidzo nerimwe gore. Mari yokuwana ane dance zviri zvikuru shanduka uye kuvimba zvinhu zvakafanana: nzvimbo, dzakavanzika maringe revoruzhinji, nhamba maawa zvaida, nezvimwewo. Figure dzimwe mari dzakadai mabhuku uye / kana kuwana paIndaneti zvokuvakisa, Michina mari, kudzidza kosi uye kana uchironga yokurarama-kembasi, mari nepokugara. Avhareji mari muripo iri kumativi $58,000. Other nezvavanofunga vari mari uye basa ruzivo kuti uchava kurega kana ukasarudza kuva yakazara mudzidzi. Ndokusaka chikamu-nguva, paIndaneti uye, nokukurumidza dance Zvirongwa vava nevakawanda zvakadaro.
Kuva CPA anotora refu ari zvikuru zvinobatanidzwa. Unofanira wapedza 150 Rokutenderwa chikwereti maawa uye vamwe rinoti chinodiwa kuti unofanira kuva akapiwa nhamba maawa akashanda pasi zvakananga pokudzora ane CPA. Uchawana 18 mwedzi kugara kuti upfuure mativi ose mana CPA bvunzo. In yose yaigona kutora rinenge 8 1/2 Makore kuva CPA (e.g. makore mashanu Rokutenderwa basa, Makore maviri pamusoro basa uye 18 mwedzi kupfuura CPA bvunzo.) Hapana chaizvo timeframe yokupedzisa ane dance dhigirii chirongwa. Riniko zvinotora achavaponesa kana iwe uchidzidza yakazara kana chikamu-nguva uye kana iwe kupinda makirasi pamusoro kembasi kana kuvatora paIndaneti. Zvimwe zvikoro kutipawo chikwereti basa ruzivo zvinogona gogodzai zvimwe maawa zvaidiwa dhigirii kupera. Sezvo nezvepurogiramu dance ndiye chirongwa dhigirii tenzi wacho, hapana rudzi advertising bvunzo kuti iwe uchava kunodiwa kupfuura pamusoro kupera. Imi nyore kupedza chirongwa chako. On avhareji, zvinotora 2-3 makore kupedza imwe dance chirongwa.
Kana uchifarira utariri nemikana kana mukuru mabhizimisi Consulting, zvino chinhu dance aizova vakasarudzwa nani. Pane rimwe divi, kana uri mukanyatsoteerera munhu "nhamba cruncher,"Unofanira kuva CPA, kunyanya kana uchida kushanda kwenguva huru ina chizvidavirire yakasimba. Kana uri CPA anoda tinyatsonzwisisa yokutengesera kwacho uye kuva employable yakawanda maindasitiri, kuwana chinhu dance kuti kubatsira. zvakafanana, kana iwe vawane dance pamwe wevasungwa munguva mari uye kuronga kuti dzidzira mu yemakambani mari kana mutero, zvine musoro chakakwana kuenda kuva CPA. Hapana mhinduro kune dance maringe CPA quandary. Pane dzoga muviri kutsvakurudza kuti kutsanangura zvayakanakira nezvayakaipira kuva mumwe kana mumwe kana vaviri. Network uye hurukuro nevanhu vane dance, CPA kana zvose uye toona zano vavanopisira. Unofanira kusarudza zvakanakisisa iwe uye kufunga zvaunoda, unyanzvi, mari uye basa nezvinangwa.
pamusoro 50 Accounting Blogs
pamusoro 11 Audit CPA Exam Tips
CPA Review Course Kuenzanisa
Deredzai Your CPA bvunzo Study Time By 116 Hours! 232 comments
Izvo Section Of The CPA bvunzo Ndinofanira Tora First? 203 comments
CPA bvunzo Application Process 127 comments
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount, Deep Discount 38 anoshandisa nhasi
CPA 36 anoshandisa nhasi
Save $700 Off on this stellar review course with this Roger CPA Premier promo code. Nemhaka yake kuita hurukuro, kosi iyi rave sadza iri bhizimisi kwemakore uye ndechako zvose kuti zvishoma nemhaka yedu Roger CPA dhisikaundi yekubvuma. With nemari izvi, hapana kurasikirwa, saka shandisa Roger CPA kopani uye vawane kudzidza nhasi.
Last Used 24 maminitsi kare
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 36 anoshandisa nhasi
CPA 38 anoshandisa nhasi
Zuva rekupera: Gumiguru 24, 2018
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 35 anoshandisa nhasi
Save $367.50 ne our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course
Last Used 30 masekonzi apfuura
October Sale! Save $800 isu Surgent CPA First Pass. Hurry offer ends soon!
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 41 anoshandisa nhasi
CPA 40 anoshandisa nhasi
Last Used 3 maminitsi kare
Save $500 kana 20% pamwe Wiley CPAexcel Platinum
CPA, Wiley CPAexcel, Special Offer 39 anoshandisa nhasi
CPA 34 anoshandisa nhasi
Save $500 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course. Chengetedza mari munzira huru nhasi nekuvongwa yedu Wiley Promo code for Platinum CPA Review kosi. *chipo ichi hazvigoni kubatanidzwa nemamwe discounts. See Wiley\_’s website for full details and exclusions.
Last Used 5 maminitsi kare
Zuva rekupera: Gumiguru 22, 2018
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount 39 anoshandisa nhasi
tora $700 kure, making Roger CPA’s Elite course the same price as their Premier course! Act fast this offer won’t come around again anytime soon. Ona Roger CPA kuti Website venguva mashoko uye kurambidzwa.
WANA kopani CODE
Last Used 1 maminitsi kare
Zuva rekupera: Gumiguru 21, 2018
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 37 anoshandisa nhasi
CPA 37 anoshandisa nhasi
Use Crush wacho sanganisira $500 Surgent CPA kopani remitemo kuti zvakanakisisa ngaakuitirei kuwanikwa musi Surgent CPA Review raMwari Premier Course. Chengetedza mari iyi Surgent dhisikaundi bumbiro slag uchidzidza ikozvino. Vanoti Surgent wako kopani bumbiro zvino uye kutanga kwako CPA rwendo nhasi!
kunopindirana RATING: ★★★★ ★
CPA, Exclusive Discount, Fast Forward Academy 36 anoshandisa nhasi
Last Used 4 maminitsi kare
CPA, Special Offer, Kupwanya The CPA 37 anoshandisa nhasi
CPA 41 anoshandisa nhasi
Zuva rekupera: Gumiguru 25, 2018
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 37 anoshandisa nhasi
tora 20% Off Roger CPA Review Audio Course kwenguva pfupi chete ichi chete Crush The CPA kopani yekubvuma. Ona Roger CPA kuti Website venguva mashoko uye kurambidzwa.
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 36 anoshandisa nhasi
CPA 35 anoshandisa nhasi
tora 20% Off off a one-time purchase of Roger CPA Review Courses & chigadzirwa. Ona Roger CPA kuti Website venguva mashoko uye kurambidzwa.
Last Used 26 maminitsi kare
Save 20% – Roger CPA Review – inopedzisira yaparara Course
tora 20% Off Roger CPA Review inopedzisira yaparara Course kwenguva pfupi chete ichi chete Crush The CPA kopani yekubvuma. Ona Roger CPA kuti Website venguva mashoko uye kurambidzwa.
Last Used 17 maminitsi kare
CPA, Yaeger CPA Review, Exclusive Discount 35 anoshandisa nhasi
Gryfin CPA inopedzisira yaparara Course Discount
CPA, Gryfina, Exclusive Discount 38 anoshandisa nhasi
tora 15% kure the Gryfin CPA Cram Course with our great discount code. Kana uri kutsvaka mamwe pakudzidza nechimwe CPA bvunzo chikamu, kuti mari iri Gryfin CPA inopedzisira yaparara Course nechokwadi imi kupfuura!
Last Used 13 maminitsi kare
Zuva rekupera: Gumiguru 27, 2018
Gleim CPA Premium Review Course Discount – Save $200 kana 10%
CPA, Gleim CPA Review, Exclusive Discount 36 anoshandisa nhasi
Save $200 with our Gleim CPA Premium Course discount and get an awesome deal on a proven course. You’ll have more money for exam fees and anything you need to help you get through the studying process when you use our Gleim discount link. Buy ikozvino slag nhasi!
Last Used 10 maminitsi kare
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 40 anoshandisa nhasi
Save $277.50 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Gold CPAexcel course. Chengetedza mari munzira huru nhasi nekuvongwa yedu Wiley Promo code for Gold CPA Review kosi.
Got CPA bvunzo Mibvunzo? Wana Mhinduro!
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 36 anoshandisa nhasi
Join mhenyu WEBINAR dzaitevedzana Surgent kuti kudzidza zvose pamusoro CPA bvunzo:
2018 CPA bvunzo Changes
Kugadzirisa Kwamungaita munhu Research Simulation Mubvunzo
Get Wokumusoro Points On Your BEC Kunyorwa Communication Mibvunzo
Zuva rekupera: Gumiguru 29, 2018
Roger CPA mari Offer
CPA, Roger CPA Review, mari Offer 36 anoshandisa nhasi
nokuti $183 mwedzi, unogona kuwana Roger CPA ongororo kosi ane inokwanisika mari ronga. Don’t hesitate—start studying for the CPA exam now thanks to this great Roger CPA financing deal.
WANA mari NOW
venhema CPA 0% mari
CPA, Surgent CPA Review, mari Offer 39 anoshandisa nhasi
Nemhaka iyi venhema 0% mari dhiri, unogona kuwana mamwe rubatsiro ane CPA kukuru ongororo kosi . For chete $49, unogona kutanga kudzidza nhasi. nemhaka iyi Surgent mari pa. Regai kungomira pakati pokushanda kwayo-kwenyu CPA rwendo kwakamirira!
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 35 anoshandisa nhasi
Onai chii ose hype zviri pamusoro woga. Test kudzinga Surgent CPA Review kosi kuti kutanga 5 Mazuva vakasununguka chose. Wakamirira chii? Get akatanga nhasi!
Tanga RAKO FREE muedzo
CPA, Roger CPA Review, Other 33 anoshandisa nhasi
CPA 39 anoshandisa nhasi
tora kusvika pa $800 & 30% kure pamwe izvi zvikuru Roger CPA kopani Codes kutanga kudzidza kuti shoma nhasi! Unogona ukwanise kuita Roger CPA Official Promo Codes, akadai Fresh Start, simba, mudzidzi, and Newsletter discounts.
RATIDZA Weekly PROMOS
Last Used 14 masekonzi apfuura
CPA, Wiley CPAexcel, Other 39 anoshandisa nhasi
tora kusvika pa $500 kure pamusoro kosi iyi inobvuma Wiley CPA kopani Codes vakapa chete panguva Crush. Wiley CPAexcel kwakaita Flashsale of Week ndiwo mukana kuti kutanga kudzidza nhasi. Ongorora nzvimbo Wiley kuti vaone kana vari kumhanya chero anokosha discounts!
Last Used 7 maminitsi kare
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 38 anoshandisa nhasi
Save $255.00 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Silver CPAexcel course. Chengetedza mari munzira huru nhasi nekuvongwa yedu Wiley Promo code for Silver CPA Review kosi.